On: २०७७ माघ १५ गते, बिहीबार, ०४:३३ बजे प्रकाशित
रिदम सिंह, बझाङ। बझाङको छबिस पाथीभेरा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ झडिखेल्लामा खुँडा प्रहार गरि हत्या गरिएका छबिस पाथीभेरा गाउँपालिका वडा नं. ३ का २५ वर्षीय अमृत सिंहको हत्यामा संलग्न चार जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ।
स्थानीय बान्नीचौर माध्यामिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको मंगलबार चुनाव सकेर घर फर्किने क्रममा सिंहको मंगलबार साँझ हत्या गरिएकाे थियो। उक्त घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले आज वडा अध्यक्षसहित चार जनालाई सार्वजनिक गरेको छ।
सिंह हत्याको घटनामा संलग्न रहेका छबिस पाथीभेरा गाउँपालिका २ का ३६ वर्षीय विकास ऐडी, सोही ठाँउका ३४ वर्षीय प्रकाश ऐडी, ३२ वर्षीय ज्ञान बहादुर कठायत, र ३७ वर्षीय केदारमान ऐडी रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्काले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराए। विकास ऐडी छबिस पाथीभेरा गाउँपालिका वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष पनि हुन्।
दिउसो विद्यालयको निर्वाचन शान्तीपूर्ण सकिएपछि बेलुका फेरि सामान्य विवाद हुँदा धारिलो हतियार प्रयोग गरि चारै जनाले सिंहको हत्या गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले बताए।
साँझ अमृत घर जाने क्रममा चार जनाको समुहमा आएका युवाहरूले उनीमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरेकाे मृतकका आफन्त सचिन सिंहले वताए। वडा अध्यक्ष ऐडीले चढ्ने सरकारी नम्बरको मोटर साइकल सहित चारै जना हतियार खुँडा लिएर मार्ने योजनाले आएकाे पीडित पक्षले बताएको छ।
१८ महिनादेखि सहमति नभएर विवादमा रहेको विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका लागि चुनाव हुदाँ काँग्रेस पक्ष विजय भएको थियो। मतदान आ आफ्नो पक्षमा हाल्नु पर्ने भन्दै दिउसो पनि दुवै पक्षका युवाहरूबीच मुठभेट भएको थियो।
२०७७ माघ १५ गते, बिहीबार, ०४:३३ बजे प्रकाशित